Qabridahare: Jaamacad Geel Lagu Dhisayo iyo Qurba-joog Dhagax Dhigtay – Rasaasa News
Feb 22, 2012 Qabridahare: Geel Jaamacad Lagu Dhisayo iyo Qurba-joog Dhagax Dhigay
Qabridahare, February 22, 2012 [ras] – Qaar ka mid ah Qurba-joog u dhalatay gabalka Qoraxay oo booqasho ku jooga degaanka Somalida Ethiopia, ayaa magaalada Qabridahare maanta dhagax dhigay dhisme Jaamacad, Madraso iyo Rug Caafimaad oo laga dhisayo magaalada Qabridahare.
Telefiishinka dawlada degaanka Somalida Ethiopia ESTV, ayaa baahiyey muuqaalo ay qurbo-joogta Qoraxay ku dhagax dhigayaan dhismaha Jaamacad lagu magacaabay Qoraxay University, Madaraso lagu magacaabay Abuu Nawaawi iyo Rug Caafimaad.
Xubnaha Qurba-joogta reer Qoraxay oo maalmahanba ku sugnaa magaalada Qabridahare, ayaa intii ay joogeen magaalada waxaay kulano la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Qabridahare.
Kulanka ay wada qaateen dadweynaha Qabridahare iyo qurbo joogtu ayey ku balameen dhismaha xarumahan. Dadweynaha magaalada Qabridahare ayaa ku yaboohay 500 oo neef oo geel ah, Qurba-joogta ayaa dhinacooda balan qaaday in ay bixinayaan lacago lagu dhisayo mashaariicdan.
Telefishinku ma sheegin kaalinka ay ku leedahay dawlada degaanka Somalida Ethiopia dhismaha mashaariicdan oo labo ka mid ah saddexdan mashruux ay yihiin adeegyada ay dawladu bixiso.
Waxaa in muddo ahba jirtay hadal hayn ku saabsan dhismaha Jaamacad uu yeesho gabalka Qoraxay, walise arintaas maanta ka hor ma jirin cid balan qaada kharajka dhismaha Jaamacada.
Mashruuca waxbarashada Qoraxay [qoraxay education fund], waa mashruuca kaliya ee ay gacanta ku hayaan Qurba-joogta u dhalay gabalka, kaas oo mudo ka hawl galayey waxbarashada magaalada Qabridahare wax badan ka qabtay tacliinta gabalka.
Mashaariicdan cusub ee ay qurba-joogtu bilaabayaan dhawaan ayaa isbadal wayn ku keeni doona guud ahaan degaanka Somalid, gaar ahaana baahida gabalka Qoraxay.